टोंगामा स्वास्थ्य संकट « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
टोंगामा स्वास्थ्य संकट
२०७२, २४ माघ आईतवार १३:५१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, टोंगा । प्रशान्त महासगरीय टापुको मुलुक टोंगामा मोटोपना र मधुमेह रोगबाट उत्पन्न समस्याले स्वास्थ्य संकट लागू गरिएको छ ।
हरेक बिहान टोंगाका माझीहरुले स्थानीय बजारमा माछा बेच्न ल्याउँछन् । तर उनीहरुलाई खासगरी बन्दरगाहको अर्को छेउमा प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा ग्राहक पाउन कठिन हुन्छ । हालैका बर्षहरुमा टंगालीहरुले आयात गरिएको बोसोयुक्त मासु नियमितजसो खान थालेका छन् । विश्वव्यापीकरणले गर्दा व्यापार सजिलो भएको छ र खानेकुरा सस्तो । ठूला व्यापारिक पसलहरुमा टिनमा बन्द गरिएका वा वरफमा राखिएका खाद्यबस्तु टनाटन छन् । तिनको तुलनामा स्थानीय उत्पादन केही महँगो पर्छन् । त्यहाँ र प्रशान्त सागरीय प्रायद्धिपहरु भरि नै देखिएको स्वास्थ्य संकटका लागि आयातित खानामाथि दोष लगाइएको छ । टंगाका ९० प्रतिशत जनता मोटा छन् र उनीहरुको तौल सामान्यभन्दा बढी छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ ।
भायओला अस्पताल एवं राष्ट्रिय मधुमेह केन्द्रकी डा. भइसिनिया मातोतोले भनिन्—‘ अहिले पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु मधुमेह रोगबाट पीडित छन् । हाम्रो कार्यभार घटेको छैन बरु बढिरहेको छ ।’
मधुमेहबाट पीडित हुनेहरुमध्ये कोलिम हुयी परिवार पनि एक हो । कयौं वर्षअघि मधुमेहसम्बन्धि जटिलताका कारण यसायाको खुट्टा काट्नुपरेको थियो । कोलिम हुयी भन्छिन्—‘पहिला मेरी हजुरआमा, त्यसपछि मेरी आमा, मेरा बुबा, मेरा दुई बहिनीहरुलगायत म पनि मधुमेहबाट पीडित छु ।’
केही बैज्ञानिकहरु वंशाणुगत कारणले पनि टोंगाबासीहरुमा बढी मधुमेह देखिएको हुनसक्ने ठान्दछन् । विगतमा यो प्रायद्धिपका बासिन्दाहरुले लामो समयसम्म आफ्नो खानेकुरा जुटाउनुपर्दा उनीहरुलाई बोसोप्रति बढी तिर्सना लाग्थ्यो । टोंगाका मानिसहरु अत्यन्तै धार्मिक प्रबृत्तिका छन् । मिठो खानेकुरा उनीहरुको रुचिको बिषय हो । तर टोंगाका स्वास्थ्यमन्त्री डा. साइया पियुकाला मानिसहरु आफ्नो स्वास्थ्यप्रति बढी जागरुक हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्—‘उनीहरुलाई थाहा छ यस्ता खानेकुरा खाएमा बिरामी भइन्छ र अस्पताल जानुपर्छ । उनीहरु अस्पताल गएमा उनीहरुले पैसा तिर्नैपर्छ ।’ तर अहिले त्यस्तो मानसिकता छैन । मानिसहरु हामीले चाहेअनुसार गर्छौं, बिरामी भएपछि पनि हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ठान्छन् ।
राजनीतिज्ञहरु कसरी यो समस्यालाई रोक्ने भनेर काम गरिरहँदा चिकित्सकहरु भने बिरामीहरुको उपचारमा लागि परेका छन् । यो स्वास्थ्य संकट तुरुन्त समाधान होलाजस्तो देखिदैन ।